Noocyada, Kheyraadka, iyo Xalalka Baadhista Khiyaanada Xayeysiiska | Martech Zone
Tuesday, April 11, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Daraasad ay sameeyeen Ururka Xayeysiiyaasha Qaranka (ANA) iyo Caddaan Cad, Daraasadda ayaa saadaalisay in xayeysiiyayaashu ku kacayaan kharash dhan $ 7.2 bilyan sanadkii hore. Iyo sahan ku saabsan xayeysiisyada muuqaalka dhijitaalka ah ee Mareykanka, Cilmi-nafsiga Iskuduwaha loo aqoonsaday 8.3% dhammaan xayeysiiska xayeysiinta inay yihiin khiyaano, marka la barbar dhigo 2.4% xayeysiisyada daabacaadda-tooska ah loo iibiyo. DoubleVerify ayaa sheegaya in ka badan 50% xayeysiiska dhijitaalka ah aan waligood la arkin.
Maxay yihiin Noocyada Khayaanada Xayeysiiska?
Dareenka (CPM) Xayeysiiska Khayaanada - khaa'imiintu waxay ku qariyaan xayeysiiska 1 × 1 pixel ama xayeysiis is dul saaran midba midka kale si ay u badiyaan dareenka uu xayaysiisku ka arkayo barta.
Raadinta (CPC) Khayaanada Ad - khaa'imiintu waxay horumariyaan degello been abuur ah, mararka qaarkoodna si otomaatig ah, oo u adeegsada ereyada muhiimka ah ee kharashka-gujiya-guurka ah ee nuxurka ah si ay ugu kaxeeyaan xayeysiisyada ugu qaalisan bogaggooda.
Isbahaysi (CPA) Khayaanada Xayeysiinta (AKA Cookie Stuffing) - bogagga intabadan waxay kubixiyaan isticmaaleyaasha ficilka qaadaya, sidaa darteed khaa'imiintu waxay barnaamij ahaan u soosaaraan ficil been ah si ay ugu khiyaaneeyaan nidaamka xayeysiiska inay aaminaan inuu jiro waxqabad.
Lead (CPL) Khayaanada Xayeysiinta (Khayaanada Beddelka AKA) - Rumayso ama ha rumaysan, khaa'imiintu runti way siin karaan dadka isticmaala lacag ka yar sidii ay u buuxin lahaayeen foomam ka badan inta ay ku bixiyaan mushaharka ku beddelashada… taas oo keentay natiijooyin been abuur ah oo faa'iido leh.
Cirbadda Ad iyo Khayaanada AdWare - khaa'imiintu waxay adeegsadaan qalabka wax lagu duubo ama malware si ay ugu durto xayeysiiska qibradeynta dhirta ee adeegsadayaasha dhabta ah, iyagoo soo saaraya aragtiyo xayeysiis badan iyo heerarka gujiska sare.
Daadinta Domainka ama Khiyaanada Xayeysiiska Xayeysiiska ah - khaa'imiinta ayaa barnaamij ahaan u beddelaya URL-yada boggaga si ay uga dhigaan xayeysiiyayaashu inay u maleeyaan been abuur ama burcad-badeednimo ama bogagga lulataaye runtii waa goobaha daabacayaasha sumcadda leh.
Khiyaanada CMS - khaa'imiintu khayaano ama ku dhejiyaan khayaanada nidaamka maaraynta waxyaabaha daabacaha ee abuura bogag iyaga u gaar ah iyagoo adeegsanaya sharciyo sharciyaysan.
Dib u Beegsiga Been abuurka - ciyaartooyada loo yaqaan 'bot' ayaa ku dayana booqdayaasha dhabta ah waxayna abuuraan aragtiyo iyo guji ololeyaasha dib u habeynta ee la wado.
Khayaanada taraafikada ama Khiyaanada Dhegeysiga Dhageysiga - daabacayaashu waxay iibsadaan taraafikada qaybta sare si ay u kordhiyaan tirada dareenka ee loo baahan yahay si loo buuxiyo ololaha xayeysiinta.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka akhrisato noocyada khiyaanooyinka xayeysiiska ah si faahfaahsan, ka fiiri maqaalka John Wilpers, Maxay yihiin sagaalka nooc ee khiyaanada xayeysiiska dhijitaalka ah?
Xalka Xatooyada Xayeysiiska:
Saddexda shirkadood ee aan kor ku soo xusnay sidoo kale waa hogaamiyaasha booska xayeysiinta ee Ad Fraud.
Cilmi-nafsiga Iskuduwaha - aqoonsan yahay Golaha Qiimeynta Warbaahinta, Xalalka 'Integral Ad Science' xalalkooda waxay daboolayaan shabakada mobilada, xayeysiisyada mobilka kujira, desktop-ka, muujinta iyo ogaanshaha khiyaanada xayeysiiska fiidiyowga. Tikniyoolajiyaddooda lahaansho iyo iswaafajin waxay ku siinayaan macne aad ku yareyso qashinka ku dhaca qorshahaaga warbaahineed adoo ka horjoogsanaya xayeysiisyada weligood in loogu adeego bogagga internetka ee been abuurka ah iyo joojinta dalabyada ku saabsan aragtida been abuurka ah ee waqtiga dhabta ah.
DoubleVerify Pinnacle - wuxuu qiimeeyaa tayada aragti kasta oo la dhiibtay iyo natiijada saafiga ah ee qiyaas kasta oo tayo leh. Barxadda sidoo kale waxay fududeyneysaa go'aammada ku habboonaanta iyadoo siineysa gorfeyn qoto dheer iyo muuqaalka waqtiga-dhabta ah ee wadista tayada aragtidaada.
WhiteOps FraudSensor iyo MediaGuard - FraudSensor wuxuu falanqeeyaa dhammaan barnaamijyada wuxuuna qiimeeyaa 1,000 + calaamadaha biraawsarka. Aqoonsaday by MRC loogu talagalay ogaanshaha taraafikada aan sax ahayn (SIVT). MediaGuard MediaGuard waa API xalka qiimeynaya codsi kasta oo dalab ama aragti xayeysiis ah oo ku jira milliseconds wuxuuna siiyaa barnaamij horudhac ah ka hor istaagida iibsiga khiyaanada.
Ku saabsan Golaha Qiimeynta Warbaahinta
MRC waa urur warshadeed aan macaash doon ahayn oo la aasaasay 1963 kana koobnaa hogaaminta telefishanka, raadiyaha, daabacaadda iyo shirkadaha internetka, iyo sidoo kale xayeysiiyayaasha, wakaaladaha xayeysiinta iyo ururada ganacsiga oo hadafkoodu yahay in la hubiyo adeegyada cabbiraadda ee ansaxa ah, la isku halleyn karo oo wax ku ool ah.
Tags: khayaanada adcirbadeyntakhayaanada adwarekhayaanada xayeysiiskaaka khiyaanada adkhiyaanada kordhinta dhagaystayaashakhiyaanooyinka cmskhayaanada beddelkaWalxaha cookiekhiyaanada cpakhiyaanada xayeysiiska cpckhayaanada ad cplkhiyaanada xayeysiiska cpmdaadinta domainlabalaabsiidvdv pinnaclearagtida khiyaanadasayniska xayeysiiska ahjohn wilpersmusuqmaasuq xayeysiiska aragtida adkhiyaanada xayeysiiskadib u beegsashada khayaanadadib u habeynta khiyaanadaraadso khayaanada adkhayaanada taraafikadacadcad